Fampahalalam-baovao Koreana: Samsung dia mihevitra ny outsourcing ampahany amin'ny fahaizany mamokatra ho an'ny UMC sy GlobalFoundaries - YIC International Co Limited |Ny mpamatsy fitaovana elektronika mihodina |www.YIC-Electronics.com
Home > News > Fampahalalam-baovao Koreana: Samsung dia mihevitra ny outsourcing ampahany amin'ny fahaizany mamokatra ho an'ny UMC sy GlobalFoundaries
Fampahalalam-baovao Koreana: Samsung dia mihevitra ny outsourcing ampahany amin'ny fahaizany mamokatra ho an'ny UMC sy GlobalFoundaries
Noho ny fihenan'ny fangatahana eo amin'ny tsenan'ny semiconductor, Samsung Electronics dia mety hampitombo ny quota outsourcing ho an'ny chip informatika misy tanjona ankapobeny. Ny tanjona ivelany dia ny UMC sy ny GlobalFoundaries.
Raha ny loharanom-baovao avy amin'ny indostria dia nanaiky ny hividy ny sensor CMOS ho an'ny fakantsary finday avo lenta avy amin'ny UMC ny departemanta LSI an'ny rafitra Samsung Electronics 'farany. Samsung dia nanomboka ny orinasam-pandrafetana azy manokana tamin'ny tapaky ny taona 2000. Ny paikadin'ny chip any ivelany ankehitriny dia nahagaga ny mpandinika indostria maro. Notaterina fa tsy ho ela ny UMC dia hampiasa teknolojia fikirakirana Samsungndrindra 28nm hamokarana chips.
Ny loharanom-baovao iray dia nilaza fa ny Samsung Electronics dia nanomboka niara-niasa tamin'ny UMC hiatrehana ny tsy fahampian'ny fotodrafitrasa semiconductor tamin'ny faran'ny taona lasa, toy ny eo amin'ny sehatry ny mpamily fahitalavitra.
Ny mpanamboatra chip lehibe dia manantena ny tahan'ny fitomboan'ny varotra amin'ny telovolana voalohany amin'ity taona ity
Samsung dia mety mieritreritra ny hanao sonia fifanarahana fanaterana entana any ivelany miaraka amin'ny GlobalFoundaries na koa ny TSMC.
Samsung dia manana tsipika famokarana S1 any Kixing, Korea atsimo, ary tsipika famokarana S2 any Austin, Texas. Ho fanampin'izay, noho ny fangatahan'ny governemanta amerikana, Samsung dia mikasa ny hanangana orinasa fandrefesana mandroso any Etazonia, saingy mbola tsy voalaza na naorina ofisialy ilay fotodrafitrasa.